Turkiga oo ku hanjabay inuu ka baxayo heshiiska qaxootiga ee Midowga Yurub!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Turkiga oo ku hanjabay inuu ka baxayo heshiiska qaxootiga ee Midowga Yurub!!
Turkiga oo ku hanjabay inuu ka baxayo heshiiska qaxootiga ee Midowga Yurub!!
Jan 28, 2017WARAR
Dowladda Turkiga ayaa ku hanjabtay inay ka noqon doonto heshiisk ay Midawga Yurub la gashay kaasoo ahaa in dib loo soo celiyo qaxootiga taga Giriigga kuwaasi oo doonaya in ay u sii gudbaan dalal ku yaal Yurub.
Saraakiisha Turkiga ayaa ku faraxsanayn go’aanka ay maxkamadda sare ku gaartay in aan la tarxiilin sideed ruux oo ka tirsan millatariga Turkiga oo Giriigga u baxsaday bishii Julaay markii uu dhicisoobay isku daygii inqilaabka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa ku tulmaamay in go’aankaasi uu yahay mid siyaasadaysan wuxuuna codsaday in dib loogu noqdo xukunkaas.
Afhayeen u hadlay Midawga Yurub ayaa sheegay in ururku uu kalsooni ku qabo in heshiiskaas qaxootigu uu sii jiri doono.
Saddex sarkaal oo sare, saddex kabtan iyo labo sarkaal oo sare ayaa diyaarad qumaati u kacda ugu cararay Giriigga ka dib markii uu dhicisoobay afgambigii dhacay bishii Juulaay ee dalka Turkiga.
Askartan ayaa waxay sheegeen in ay noloshooda u baqayaan haddii la masaafuriyo. Xaakimkii maxkamadda ayaa go’aamiyay in ay u badantahay in raggani aysan maxkamad caadil ah ku heli doonin gudaha dalka Turkiga.
Kumanaan askar ah ayaa xabsiga loo taxaabay kuwo kalana shaqada ayaa laga eryay kadib markii lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen afgambigii bartamihii sanadkii hore ka dhacay dalka Turkiga.
Previous PostDAAWO: Xildhibaan Geesi ah oo kasoo dhex Baxay Baarlamaanka, oo si yaab leh uga hadlay Mustaqbalka Soomaliya!! Next PostDAAWO MUUQAAL: Dalalka hormaray Noocyada Shaqo ee Dadkooda waayi Doonaan 2030 !